ग्यास्ट्रिकको बेलैमा उपचार नगरे क्यान्सर ! (भिडियो सहित) | Hamro Doctor News
ग्यास्ट्रिकको बेलैमा उपचार नगरे क्यान्सर ! (भिडियो सहित)
अधिकांश नेपालीलाई ग्यास्ट्राइटिस अर्थात चलनचल्तीको भाषामा भन्दा ग्यास्ट्रिकको समस्या रहेको छ । खानपान र जीवनशैलीका कारण यस्तो समस्याका बिरामीहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । किन हुन्छ ग्यास्ट्रिक ? यसबाट बच्न के गर्ने ? जनरल फिजिसियन तथा छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश पौड्याल यसो भन्छन् ...
चिकित्सकीय भाषामा ग्यास्ट्रिक भनेको पेट हो । ग्यास्ट्रिकमा देखापर्ने समस्या भएकाले नै यसलाई ग्यास्ट्राइटिस भनिएको हो ।
के हो ग्यास्ट्राइटिस ?
हाम्रो शरीरमा विभिन्न पाचन रसहरु रहेका हुन्छन् । खाना खाँदा आमाशयभित्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामको अम्ल उत्पादन भैरहेको हुन्छ । जसले खानालाई पचाउनुको साथै, आमाशायभित्र रहेका किटाणुहरुलाई मार्ने काम गर्छ । हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामक एक प्रकारको किटाणु हुन्छ । यहीभित्र रहेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड र हेलिकोब्याक्टर पाइलोरीको समायोजित उत्पादन र मात्र नमिले देखिने समस्या नै ग्यास्ट्राइटिस् हो ।
ग्यास्ट्राइटिस् हुने कारण :
असन्तुलित खानपान ।
समयमा नखानु ।
मसलादार खाना बढी खानुको साथै, अमिलो, पिरो, चिल्लो बढी खानु ।
धुम्रपान तथा मध्यपानको सेवन बढी गर्नु ।
खाली पेटमा दुध हालेको चियाकफी पिउनु ।
खानासाथ सुत्ने बानी गर्नु ।
दिशा पिसाब लामो समय रोक्नु ।
ग्यास्टाइट्रिस्का लक्षण यो कुन चरणमा पुगेको छ सोही अनुसार हुने गर्दछ । साधारणतथा पेट दुख्नु ।
बान्ता आउने ।
कालो दिसा आउने ।
नाइटो वरपरको भाग बढी दुख्ने ।
कसरी हुन्छ ग्यास्टाइट्रिस बिग्रिए क्यान्सर :
ग्यास्टाइट्रिसलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन् । यसको बेलैमा उपचार गरिएन भने ज्यान नै जान सक्छ । आमाशयका भित्तामा इन्फ्लामेसन सुन्निएर रातो भएर दुख्ने समस्या पछि ग्यास्ट्राइटिस्मा परिणत हुन्छ । ग्यास्ट्राइटिस्लाई उपचार गरिएन भने बिस्तारै यसले आन्द्रामा असर पुर्याउँछ र अल्सर हुन्छ । र कालान्तरमा गएर क्यान्सर जस्तो घातक रोग लाग्छ ।
ग्यास्ट्राइटिस्बाट बच्ने उपाय :
यसबाट बच्ने सबैभन्दा उपयुक्त तरिका भनेकै नियमित तरिकाले,सन्तुलित खाना खाने । भोक लागेको बेला खाने, नलागेको बेला कोचेर नखाने । धुम्रपान मद्यपान नगर्ने । सुख्खा खानेकुरा भुजिया,चिउरा जस्ता कुरा नखाने । बढी अमिलो, पिरो, चिल्लो खाना नखाने ।
#जनरल फिजिसियन तथा छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश पौड्याल
Last modified on 2019-01-30 07:10:03